Ku saabsan - OUZHAN Ganacsiga (SHANGHAI) CO., LTD
Aragtida ayaa wax walba go'aamisa, faahfaahinta ayaa go'aamisa guusha
Ouzhan (Shanghai) Co., Ltd. waa shirkad isku dhafan warshadaha iyo ganacsiga. Warshadu waxay ku taalaaBuilding 38, Jinguo Industrial Park, No. 500, Zhenkang Road, Degmada Jinshan, Shanghai. Shirkaddu waxay ku fadhidaa aag 1200 mitir murabac ah waxayna leedahay qiyaastii 30 hawl wadeyaal, 10 injineero iyo 5 kormeerayaal tayo leh. Qalabka ugu muhiimsan ee wax soo saarka iyo soosaarka in kabadan 30. Wada-hawlgalayaashayada waxaa kamid ah Trutzschler, iGuzzini, SafeFire, FujiXerox, Ghrepower, Reco iyo wixii la mid ah.
Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. wuxuu ku takhasusay ka shaqeynta qaabeynta dhammaan noocyada makiinadaha iyo qaybaha qalabka. Tiknoolajiyadayada farsamaynta waxaa ka mid ah axdi qarashka CNC, leexinta CNC, qashin qubka gudaha iyo dibedda, Laser goynta iyo foorarinta birta. Mashiinka CNC, Mashiinka birta-birta, 4/5 dhidibka CNC machining, Been abuur iyo dhinta-shubay iwm
Wax soo saarkayaga waxaa loo isticmaalaa dhinacyo kala duwan, sida mashiinada dharka, dhalinta tamarta dabaysha, qalabka sheybaarka, aaladaha caafimaadka, nalalka ganacsiga, aerospace iyo wixii la mid ah.
Qalabkeena wax soo saar ee muhiimka ah waxaa laga keenaa Switzerland iyo Japan.
Waxaan haynaa 10 injineer oo ku sugan xarunteena R&D, dhamaantood waa dhakhaatiir ama macalimiin ka socda Jaamacada Sayniska iyo Teknolojiyadda Shiinaha.
Waxaan haynaa shaqaale kormeer tayo leh iyo qalab, sida ku cad heerarka caalamiga ah ee alaabooyinkaaga si ay u tijaabiyaan, una soosaaraan warbixin imtixaan faahfaahsan.
Cabirro iyo qaabab loo qaabeeyey ayaa la heli karaa. Ku soo dhowow inaad nala wadaagto sawiradaada 2D ama 3D ah, aan wada shaqeyno si aan nolosha uga dhigno mid hal abuur leh.
Waqtigan xaadirka ah waxaan leenahay in ka badan 30 nooc oo ah mashiinada horumarsan iyo qalabka baaritaanka, badankood waxaa laga keenaa Switzerland iyo Japan.
Ouzhan waxay leedahay sideed xariiq oo wax soo saar waxayna hal maalin soo saari kartaa 3000 oo gogo 'oo ah alaabooyin dhammaaday.
Waxaan leenahay wakiil noo gaar ah oo caalami ah oo ka shaqeeya aagga, markastana waxaan ku dhammeynaa wax soo saarkii waqtigiisa, kaas oo isla maalintaas la geyn karo dekedaha badda ama garoomada diyaaradaha.
Alaabtayada ayaa la tijaabin doonaa seddex jeer ka hor inta aan la soo dirin: dete Qalabka wax lagu baaro; Dete Ogaanshaha gacanta; Test Tijaabada tijaabada. Ugu dambeyntii, soo saar warbixinta imtixaanka.
Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2005 wuxuuna soo saarayay qaybo mashiinada muddo 15 sano ah. Tan iyo markii la bilaabay, ka dib markaan helno macaamiisha '3D ama CAD sawirada, injineeradayada ayaa falanqeyn doona. Iyada oo ku saleysan buuxinta shuruudaha macaamiisha, waxaan inta badan soo bandhigi karnaa talooyin xirfad leh si loo kaydiyo kharashaadka macaamiisha ama si fiican loo dhammaystiro wax soo saarka.
Laakiin macaamiishaas aan haysan sawirro, kuwa naga aarsada ayaa kaa caawin kara.
1. Haddii aad haysato shey ka baxsan-shelf oo aad dooneysid inaan soo saarno, laakiin aadan haysan sawirro 3D ah, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad alaabtaada noo soo dirto, waxaan karnaa khariidaddiisa si aan markaas u bilowno wax soo saar.
2. Haddii aadan haysan badeecada ama sawirrada, taasi waa caadi. Kaliya nala wadaag fikradahaaga. Injineeradeenu waxay qaabeyn doonaan sawirada si waafaqsan shuruudahaaga waxayna kuu soo diri doonaan iyaga si loo xaqiijiyo ka dib baaritaanka.
Ouzhan hadda waxaa ka shaqeeya in ka badan 30 shaqaale in ka badan 10 %na waxay haystaan ​​shahaadooyinka Masters ama Doctor. Toban injineeradeenna dhammaantood waxay ka qalin jebiyeen jaamacadaha ugu sarreeya Shiinaha ee ku takhasusay mashiinada waxayna leeyihiin aqoon xirfadeed hodan ah. Shaqaalaheena ajaanibta ah ganacsiga waa aqoonyahano caalami ah oo kaqalinjabiyay ganacsiga, kuna xeel dheer geedi socodka ganacsiga dibada. Labada waaxood ee shirkadeena ayaa is caawin kara isla markaana kuu keeni kara adeegga ugu fiican.
Dhaqanka shirkadeed ee shirkadeed waxaa lagu abuuri karaa oo keliya saamaynta, dhexgalka iyo isdhexgalka. Horumarinta Ouzhan waxaa taageeray qiimaheeda asaasiga ah sanadihii la soo dhaafay ------- Daacadnimo, Hal-abuurnimo, Mas'uuliyad, Iskaashi.
Ouzhan had iyo jeer wuxuu u hoggaansamaa mabda'a, u janjeedha dadka, maareynta sharafta, tayada ugu sarreeya, sumcad qiimo leh Daacadnimo ayaa noqotay isha dhabta ah ee tartanka Ouzhan.
Cusbooneysiintu waa aasaaska dhaqanka Ouzhan.
Hal-abuurnimadu waxay u horseedaa horumar, taas oo horseedda xoog koror.
Dhammaan waxay ka soo baxaan hal-abuurnimo.
Dadkeennu waxay ikhtiraac ku sameeyaan fikrad ahaan, farsamo ahaan, farsamo ahaan iyo maamul ahaanba.
Shirkadeennu weligeed waxay ku jirtaa xaalad firfircoon si ay ula jaanqaado isbeddelada istiraatiijiyadeed iyo bey'adeed loona diyaar garoobo fursadaha soo ifbaxaya.
Ouzhan waxay leedahay dareen xoogan oo masuuliyad iyo hadaf u ah macaamiisha iyo bulshada.
Waxay had iyo jeer ahayd xoogga dhaqaajiya horumarka OuZhan.
Wada shaqeynta si loo abuuro xaalad guul-guul ah ayaa loo arkaa inay tahay hadaf aad muhiim ugu ah horumarka shirkadaha
Ouzhan wuxuu ku guuleystey inuu gaaro isdhexgalka ilaha, isdhaafsiga labada dhinac, sida waaxda tikniyoolajiyada iyo waaxda ganacsiga, dadka xirfadleyda ah ha u ogolaadaan inay si buuxda u ciyaaraan takhasuskooda.
1. Adeeg qaybo qalab mashiin ah
2. Wax soo saar badan
3. Naqshadeynta alaabta
4. Sample samaynta
5. Taageero farsamo
6. Tijaabada badeecada
7. Adeegga saadka iyo dhoofinta
8. Adeegga iibka kadib